FAISAL ALI WARRABE OO ISKU TILMAAMI DOONA AMIIR AL MO’MINIIN HADDII U NOQDO M/WEYNAHA SL « SAWNEWS NETWORK
« Ismaaciil Muuse oo Saacado ku Xanibnaa Madaarka Hargeysa Baasaboorkana laga Qaaday
Cali Biikallo Oo Saadaaliyay In Natiijadii Diiwaan Gelintu Aanay Midho Dhali Doonin, Doorashadana Mar Ay Noqotaba Lagu Geli Doono Diiwaan Gelin La’aan. »
FAISAL ALI WARRABE OO ISKU TILMAAMI DOONA AMIIR AL MO’MINIIN HADDII U NOQDO M/WEYNAHA SL
Maanta oo bishan October tahay 2 waxan akhristay waraysi u la yeeshay Goodoomiyaha Xisbiga UCID hiiraan online. Wuxu ka hadlay arimaha Somalia, Siyaasada iyo diinta Somaliland iyo haddii talada Somaliland u qabto sidii u xukumi lahaa.
Xagga Somalia wuxu fariin u dirayaa; Sheikh shariif iyo Hassan daahir Aweys oo u ku guubaabinayo in ay hashiiyaan waayo wuxuu u arkaa laba nin oo isku qabiil ah oo walaalahood laynaaya waa sidduu hadalka u dhigey e. Wuxuu u sheegaya in ay Somalidu tahay ta maanta aduunwaynaha ugu liidata. Markuu ka hadlaayay dadka aan u dhalan goobaha dagaalka, wuxuu yidhi; “Waxa weeye, Caqli keena oo Daahir Aweys iyo Sheekh Shariif laba Nin oo Dagaal soo wada galay weeye oo isku Beel ah, maantana cidda dhimanaysaa waa dadkoodii. Kuwa Somaliland sheeganaya ee Wasiirada u ah cidi kama dhimato, ka Ra’iisal-Wasaaraha ah (C.C.Cali Sharma’arke) ee Boosaaso ka yimi cidi kama dhimato..dadka maanta qaxay ee Biyaha la siinayo ee Adduunyadu ku qaylinayso waa dadkoodii. Maxaa keenay in Wasiir dadkiisu nabad yahay oo uu Shidaal qodanayo aad dadkaaga ugu laynaysaa. Waxaan leeyahay Sh. Shariif iska ilow Dawladda oo iska dhig oo la shir Dadkaaga. Waayo, Kitaabka Ilaahay iyo Sunnaha Rasuulku waa mid kaliya..Iyada oo aanay Soomaaliya wax noqon ayay Somaliland u hanqal-taagayaan.” Ayuu yidhi Faysal, waxaanu intaa raaciyay oo uu yidhi, “Waxaan leeyahay, haddii ay Soomaalinimadu dhab idinka tahay heshiiya. Laakiin, iyaga oo Xaafad-Xaafad isku dilaya in ay Magacii Soomaali wataan waa ayaan-darro oo Magacii Soomaali ayay baabiiyeen. Waxaan ugu baaqayaa inay Dhiigga daadanaya iska joojiyaan oo ay iska saaraan ka leh Mujaahid baan ahay iyo Afrikaanba oo danihiina u heshiiya oo arrimihiina dhammaysta. Dadkiinana ka daaya hoogga iyo ba’a.” Inkasta oo hadalkani run ka yahay, waxan u arkaa isu dir iyo kala qaybin ee uma argo maslaxad raadin.
Waxay Somalidu ku mahmaahdaa Maroodigu Tagarta ku taala ma arke e ta kaluu arkaa. Garan maayo ujeeda Faisal u siiyey wareysigan Hiiraan Online. Haddii u daacad ka yahay uu u diir naxaayo dadka halkaas ku dhiminaaya waxa kaliya ee ku filayd in u yidhaado ; islaanimada way ka fugtahay falalka fooshaxan ee halkaas ka dhacaaya una sheego in u ka xunyahay isla markaasna u soo noqda Somaliland uu ka hadlo dadkii la gowracaay iyo dadkii ku dintay tala xumada Mucaaridka uu sheegu in ay ka fogtahay islaanimada iyo walaalnimada reeraha wada dhashay.
Sidda ku qoran waraysiga, Faisal wuxu yidhi : “WAXAANU DOONAYNAA IN AANU XOOJINO SHAREECADA ISLAAMKA, WAAYO HOGGAAMIYUHU WAA IN UU NOQDAA AMIIRKA MUSLIMIINTA, mana kala baxayaan labadaasi. Cidda tidhaahda kala saara, waa cid kufrinimo inoo horseedaysa. Markaa waxaanu doonaynaa in Kitaabka Ilaahay soo dejiyay iyo Sunnaha Rasuulka (CSW) dalkan lagu xukumo, laakiin, taa macnaheedu maaha Kiristankaan dilayaa oo waan is-qarxinayaa. Diinta Islaamku waa tii u dambaysay ee Diimaha, waxay soo jiidataa dadka kale. waayo, waa in qofka aan Diintaada haysan ay soo jiidataa. Laakiin, waan is-qarxinayaa oo Janno ayaan tegayaa Diinta Islaamku ma sheegayso.”
Waxa hadalkiisa ka muuqata in u isku tilmaami doono AMIIR AL MO’MINIIN haddii u noqdo madaxwaynaha Somaliland. Diinata islaamku way qeexday cadaalada iyo dadnimadaba. Haddii sidda ay diinta islaamku tilmaamyso loogu dhaqmo waxa hubaal ah in dil, dhac, isku dir, xumaan, kala qaybin, gowrac, iyo wixii kale ilaahay ka xaaraantinimeeyey ummadiisaba in ayna dhacayn. Hase yeeshe ma lagu dhaqmaaba taala. Marka diinta la siyaasadeeyo waxa maamulku isku rogaa dictaatooriyad ku gaboodfasha cadaalada iyo sinaanta. Wuxuu og yahay Faisal wadamada ku gaboodfala diinta Islaamka in ay aanay jirin cadaaladi oo dadku cabsi ku nool yihiin.
Wuxu is garamarinayaa Faisal in u si daacad uga hadlu dadkii la gowracay ee dadkii gaystay gowaraca iyo raadkiiba laga yaabo in u wax ka ogyahay. Waxa kale uuna ka markhaati furin uuna kala soo cin dhibaatada haysata Somalida. Faisal waxay ahayd in u ka hadlo horuwmarka Somaliland gaadhay anynaan helin intii ka horeysay dib u soo celintii xoriyada Somaliland. Wuxuu ilaawey marxaladihii dadkeenu soo maray iyo dilkii iyo kadeedkii ku dhacay. Waxan iswaydiinayaa wuxuu uga jeeday warbixinta iyo guubaabada intaa le eg ee ku u ku tirtirsiinayo Shariifka iyo Aweyskaba. Ma waxay ka ahayd is MUUJIN (PR ) mise ISMEELAYN. Somalidu waxay ku mahmaahdaa “ Baroortu orgiga wayn”. Wuxu hadalkiisa ku daray intan: “ Waxaan leeyahay, haddii ay Soomaalinimadu dhab idinka tahay heshiiya. Laakiin, iyaga oo Xaafad-Xaafad isku dilaya in ay Magacii Soomaali wataan waa ayaan-darro oo Magacii Soomaali ayay baabiiyeen. Waxaan ugu baaqayaa inay Dhiigga daadanaya iska joojiyaan oo ay iska saaraan ka leh Mujaahid baan ahay iyo Afrikaanba oo danihiina u heshiiya oo arrimihiina dhammaysta. Dadkiinana ka daaya hoogga iyo ba’a.” In badan ayaa lagu kari la’aa waar danta guud ee Somaliland ka fikir oo jooji diimada joogtada iyo dadka lagu kicinayu tola’aay ee laga horkeenayo maamulka iyo nabadgalyada. Marka an isku soo wada duubno arimaha u ka hadlay, waxa halkaa ka cad in u u dabagaalaynayo Somaliweyn, iyadoo la ugyahay in u masruuc ka soo qaatey Inter-Peace kaas ku salyasan sidii Somaliland loo burburin ee loo rumayn lahaa Somaliweyn.
Faisal is not and has not been consistent in his messages and political tactics. He is always against Somaliland development and indepedence. Sometimes he prays for the President and other times he curses him. He is sometimes against Siilaanyo and other times he is with him. Every day he wakes up with new negative ideas which are against the interest of our people and Somaliland in general.
This entry was posted on October 5, 2009 at 7:50 pm	and is filed under Articals.